नयाँ स्मार्टफोन किन्दै हुनुहुन्छ ? यी ६ महत्वपूर्ण विषयहरु नहेरी कहिले पनि खरीद नगर्नुहोस् - Technology Khabar
» नयाँ स्मार्टफोन किन्दै हुनुहुन्छ ? यी ६ महत्वपूर्ण विषयहरु नहेरी कहिले पनि खरीद नगर्नुहोस्
नयाँ स्मार्टफोन किन्दै हुनुहुन्छ ? यी ६ महत्वपूर्ण विषयहरु नहेरी कहिले पनि खरीद नगर्नुहोस्
Technology Khabar २९ श्रावण २०७७, बिहीबार
कोरोना अवधिमा सुस्त भएको बजार अब ट्र्याकमा फर्कदै छ। त्यस्तै, अब नयाँ फोनहरुको लन्चिङ्गसँगै स्मार्टफोन बजार पनि फिर्ता हुने अवस्थामा छ।
सबै प्रकारका फोनहरू बजारमा ग्राहकहरूका लागि उपलब्ध गराइदै छन्।
नयाँ लन्च हुने स्मार्टफोनहरुमा आजकल कम्पनीहरूले क्यामरा र ब्याट्रीमा धेरै ध्यान दिइरहेका छन्। तर धेरै पटक हामी बुझ्दैनौं कुन नयाँ फोन लिनु उत्तम हो। यदि तपाईं हतार फोन किन्न हुन्छ र फोनको सुविधाहरूमा ध्यान दिनुहुन्न भने तपाईं सँधै चिन्तित हुन सक्नुहुन्छ, किनकि फोन त्यस्तो चीज हो जुन हामी प्रायः परिवर्तन हुँदैनौं।
त्यसोभए के तपाईंलाई थाहा छ कि नयाँ स्मार्टफोन लिनु अघि तपाईंले फोनका धेरै कुरा विचार गर्नुपर्दछ।
हामी तपाईंलाई यहाँ बताउँछौं कि यदि तपाईं नयाँ फोन किन्नको लागि योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने यी ६ वटा चीजहरूमा ध्यान दिनै पर्छ।
डिस्प्लेको गुणस्तर हेर्नुहोस्
पछिल्लो दिनमा उच्च रिजोलुसनसहितका डिस्प्लेहरु आईरहेका छन् । न्यून रिजोलुशन भएका डिस्प्लेका फोनहरु अहिले कुनै पनि ग्राहकले स्वीकार गर्दैनन्। यदि तपाईं पनि फोन किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने, फोनमा एमोलेड एचडी डिस्प्ले भएको फोन चयन गर्नुहोस्। तिनीहरू एलसिडी स्क्रीनका फोन भन्दा धेरै राम्रो हुन्छन् र पावर कम लिन्छन्।
राम्रो प्रोसेसरको आवश्यकताहरू
कुनै पनि स्मार्टफोनको हार्डवेयर यसको प्रोसेसर हो। जब यो एक फोन को कार्यक्षमताको विषय आउँछ त्यसमा यो प्रोसेसद्वारा नै निर्णय गरीन्छ। यस्तो अवस्थामा, क्वालकम स्न्यापड्रागन ८५५ भन्दा कमको फोन तपाईँको लागि उपयुक्त हुँदैन् । यदि तपाईं कुनै समस्या बिना नै फोनमा पबजी खेल खेल्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले उत्तम प्रोसेसरको साथ फोन छनौट गर्नुपर्नेछ।
कुनै फोनहरु त्यसको डिजाइनबाट आकर्षक देखिन्छ । त्यसैले बजारमा चलिरहेका नयाँ ट्रेण्ड र डिजाइन भएका फोनहरु किन्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैगरि फोनको स्पीकरको बारेमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
फोन क्यामरालाई लिएर विभिन्न किसिमका ट्रेण्डहरु आईरहेका छन् । अझ अहिले त एउटा मात्र नभई चार क्यामरा अर्थात क्वाड क्यामरा फंगसनमा फोनहरु आउने गरेका छन भने सेल्फीका लागि ड्यूल क्यामराहरु प्रयोग हुने गरेका छन् । कतिवटा क्यामरा प्रयोग गरिएको छ भन्ने विषयले धेरै फरक नपारेपनि त्यसले नयाँपन दिने गर्दछ । तर फोनमा प्रयोग भएको क्यामराको गुणस्तर कस्तो छ र कति मेगापिक्सेलको सेन्सर प्रयोग गरिएको छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।
र्याम र स्टोरेज
फोनको र्याम र स्टोरेजले फोनको परफरमेन्सलाई बढाउँछ । फोनमा जति धेरै र्याम हुन्छ त्यति सहजरुपमा फोन प्रयोग गर्न सकिन्छ र फोन ह्यांग हुँदैन । अहिले बजारमा ६जीबी र्यामको प्रयोग अधिक भईरहेको छ । त्यसैगरि स्टोरेज बढि भएमा छुट्टै मेमोरी कार्डको आवश्यकता पर्दैन र डाटाहरु लामो समयसम्म फोनमा नै स्टोर गर्न सकिन्छ ।
ठूलो क्षमताको ब्याट्री
स्मार्टफोन जति प्रयोग हुन्छ त्यति ब्याट्रीको खपत बढि हुन्छ । यस्तोमा अधिक ब्याट्री पावर भएको फोन किन्नु उपयुक्त हुन्छ । महंगा फोनहरु किन्ने तर त्यसको लागि सँधै छुट्टै पावर बैंक आवश्यक पर्यो भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन् । अहिलेको समयमा ४,००० एमएएच भन्दा कम ब्याट्री पावर भएको फोन लिनु उपयुक्त हुँदैन् ।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०७७, बिहीबार
के होला कालोसूचीमा परेपछि ओम्नीले पाएको देशभरका आईटी ल्याब स्थापनाको कार्य ?
क्वालकमले स्न्यापड्रागन ८८८ चिपलाई एन्ड्रोइडका लागि ‘लक्की नम्बर’ को रुपमा ब्रान्डिङ्ग गर्दै
डेलिभरी ड्राइभरहरुलाई शाैचालय जाने फुर्सदसम्मा नदिएकोमा अमेजनले माफी माग्यो
दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्यो- ७२५ विद्यालयहरुमा आईटी ल्याब स्थापना, ३० प्रतिशत भुक्तानी गरियो
सानिमा बैंकको मोबाइल दक्षिणा योजना, दैनिक ‘सामसङ्ग जे सेभेन’ उपहारमा
११ आश्विन २०७४, बुधबार
इलन मस्कको टेस्लाले डजिक्वाइनलाई स्वीकार गर्ने बारेको ट्वीट, २५ लाख भन्दा धेरै प्रतिकृया
एएमडी जीपीयूसहितको एक्जिनोस चिपसेट यसै वर्ष आउने, विण्डोज ल्यापटमा प्रयोग गरिने
नथिङले आफ्नो पहिलो ‘इयर १’ इयर बड जुनमा सार्वजनिक गर्ने